Iza avy ireo atleta afrikàna mifaninana amin’ny Lalao Olaimpikan’ny Andro Ririnina ao Pékin 2022 ? · Global Voices teny Malagasy
Ny fandraisana anjaran'i Afrika amin'ny JO Andro Ririnina Pekin 2022
Voadika ny 21 Marsa 2022 12:57 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Português, عربي, English
“Air” an'i ChrisMRichards nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Raha nanomboka ny 4 Febroary teo tao Pekin, Shina ny Lalao Olaimpika (JO) 2022 fanao amin'ny ririnina, nirohotra nankany ny atleta avy amin'izao tontolo izao mba handray anjara amin'ny hetsika, tsy niavaka tamin'izany i Afrika. Na ohatra aza ka zara fa manana ranomandry, na tsy manana mihitsy, ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny tanibe afrikàna, mametraka tontolo iray manasarotra ny fanomanana ireo lalao ôlampikan'ny andro ririnina, natrehan'ireo atleta afrikàna ny fanamby. Hatreto, tsy misy atleta afrikàna nandrombaka medaly tamin'ny JO Andro Ririnina. Ity taona ity ve no fotoana hanovàn'i Afrika ny tantana?
Firenena afrikàna dimy ihany no ho avy ao Pekin amin'ity taona ity, nisy fihenana raha oharina amin'ireo firenena valo nandray anjara tamin'ny Lalao tao Pyeongchang – Kôrea Atsimo tamin'ny 2018. Mifanohitra amin'ny fandaharana natao tamin'ny 2018, i Afrika Atsimo, Tôgô ary i Kenya dia tsy ho isan'ireo hanana solontena noho ny tsy nisian'ny fotoana nisafidianana ary ny tsy fahampiana ara-bola.
Ireto ireo firenena afrikana dimy sy ireo atleta mitondra avo ny fanevan-dry zareo amin'ireo lalao amin'ity taona ity :
Ity firenena nosy ity dia nandefa an'i Mathieu Neumuller raha i Mialitiana Clerc kosa efa miverina hanao ny lalao faharoany amin'ny JO Andro Ririnina taorian'ny nanombohany tamin'ny 2018 tany Pyeongchang, Kôrea. Samy handray anjara amin'ny fikorisàna ski midina an-tendrombohitra izy ireo. Clerc no hany vehivavy mpitaingina ski avy any amin'ny tanibe ho an'ireo lalao amin'ity taona ity, taorian'ny fialàn'ilay Keniàna Sabrina Samider. Nambaran'i Clerc tamin'ireo mpikarakara ny lalao ôlaimpika fa manantena izy ny ho lasa “aingampanahy ho an'ireo Afrikàna”, nampiany hoe:
Miezaka aho ny ho vehivavy (afrikàna) voalohany hiakatra ny lampihazon'ny Tompondaka Erantany ary hitondra medaly volamena amin'ireo JO. Tiako ny ho lasa isan'ny iray tsara indrindra amin'ireo erantany mpikorisa amin'ny ski avy any an-tendrombohitra. Ary aty amin'ny JO aty Pékin, tiako ny ho tafiditra anatin'ireo 40 voalohany.
Clerc dia teraka tao Antananarivo, renivohitr'i Madagasikara, ary lehibe tao Frantsa. Teo amin'ny fahatelo taonany izy no nanomboka nikorisa tamin'ny ski tany amin'ny faritra niaviany ao Haute-Savoie, any amin'ireo Alpes frantsay. Noho ny fitiavany fanatanjahantena sy ny herimpony, tafita izy hiatrika ireo Lalao tany Pyeongchang 2018 teo amin'ny faha-16 taonany. Efa nandray anjara ihany koa izy tamina fifaninanana hafa fikorisàna tamin'ny ski tany Amerika Atsimo sy Eorôpa tato anatin'ny taona efatra farany. Ny fahombiazany dia ampy ho tosika ho an'lay mpiray tanindrazana aminy, Mathieu Neumuller. Teraka tany Madagasikara, saingy lehibe ihany koa tao Frantsa.
Shannon Abeda no handray anjara amin'ny fikorisàna amin'ny ski avy any an-tendrombohitra, hisolo tena an'i Érythrée. Efa fanindroany izao fiverenan'i Shannon amin'ny JO izao taorian'ny nizakàny ny fanavakavahana volonkoditra, fankahalàna vahiny, sy onjam-panararaotana teny anaty tambajotra nandritra ireo lalao farany nataony. Nametraka fialàna izy ary tsy nitady akory izay ho voafantina tamin'ny faran'ny taona 2021. Nolazainy fa fanantenany ny mba ho aingampanahy ho an'ireo andian-taranaka ho avy hanao ski avy ao Eritrea. Faniriany ihany koa ny hihataka amin'ny ski ka hanomboka handray anjara amin'ireo fifaninanana bobsleigh. Nandefa lahatsary iray izy, mitondra ny lohateny hoe « Dear Shannon » ao amin'ny Instagram, momba ny làlana nodiaviny, ka tanjona ny hanambony maoraly handray anjara amin'ireo Lalao ary handresena ireo fanararaotana natrehany fony izy nihalehibe atao Kanadà. Resahan'ilay lahatsary ny fialàna amin'ny fari-piadànany sy ny safidiny hiverina indray amin'ny JO. Nambarany fa ny safidiny dia avy amin'ny rafitra mpanohana azy sy avy amin'ireo olona manodidina azy.
Hisolo tena an'i Maraoka i Sami Lamhamedi, mpikorisa ski sy mpanao ‘slalom’ anatin'ny sokajy lehilahy. Fikasany ny hanatsara ireo zavabitany tany aloha tamin'ireo fiadiana ny ho tompondaka erantany. Maraokàna ny rainy ary Kanadiàna ny reniny. Saingy nisafidy ny hihazakazaka hisolo tena ny firenena niavian'ny rainy izy. Nandrombaka medaly volamena izy tamin'ny JO Andro Ririnina natao ho an'ny tanora tamin'ny 2012 tany Innsbruck, Aotrisy, ary avy eo nisolo tena an'i Maraoka tamin'ny JO Andro Ririnina 2014 tany Sotchi, Rosia. Antenainy ny hanatsara ny fisehoany anatin'ny sokajy zokiny mandritra ireo JO Andro Ririnina ao Pékin.
Handray anjara amin'ny antsoina hoe “ski de fond” ilay Nizeriàna Samuel Ikpefan Uduigowme. Izy no Nizeriàna voalohany manao ny “ski de fond” (cross-country skiing) ary hany solontena afrikàna tsy mandray anjara amin'ny fifaninanana mikorisa avy any an-tendrombohitra. Tamin'ny 2016, nampihariny ny fanovàna ny fizakàny zom-pirenena roa, frantsay nankany amin'ny nizeriàna, ary voatery nandeha nankany Abuja, Nizerià izy mba handresy lahatra ny Federasiônan'ny ski momba ny fahafahany manao izany. Efa manampy sahady izy amin'ny fanentsenana ny banga amin'ireo Nizeriàna hafa mpikorisa amin'ny ski saingy mipetraka any ivelany izay maniry ny hisolo tena ny firenena niaviany. Antenainy ny hitarika Nizeriàna bebe kokoa hikorisa amin'ny ski mandritra ny JO 2026 any Milan sy Cortina.
Dingana fankatoavana henjana no nolalovany mba ho afaka hanao ny JO 2021, satria nasain'ireo manampahefana nizeriàna nody an-tanindrazana izy haneho ny fahaizany amin'ny alàlan'ny fampiasàna ireo ski misy kodiarana. Tany amin'ireo Alpes frantsay, toerana naha-lehibe azy izy no nanao fanazarantena. Nandray anjara ihany koa izy tamin'ny Fiadiana izay ho tompondaka erantany tao Soeda tamin'ny 2021 mba hanamafisany ny toerany, fotoana nanombohany ny “ski de fond”.
Ilay Ghaneàna Carlos Maeder no mpikorisa ski avy any an-tendrombohitra be taona indrindra amin'ity Lalao ity ary ny mpikorisa fahatelo avy any Ghana. Zaza natsangana ary notezaina tany Eorôpa, nataony izay hisoloana tena ny firenena nahaterahany.
Ny hanome ohatra tsara sy hampiseho amin'ireo tanora ao Soisa sy Ghana hoe azo atao ny zavatra rehetra rehefa arahana finiavana sy ny ezaka ilaina amin'izany, tsy misy ny tendrombohitra avo kokoa!
Amin'ny fampiasàna ny bilaoginy, hazavainy fa na nomen'ny reniny ho atsangan'olona aza izy, dia nifandray tsy tapaka tamin'ny kolontsaina sy ny fototra ganeàna niaviany. Mpilalao baolina kitra fahiny, tamin'ny 2017 izy no namelona indray ny fahalinany tamin'ny ski ary voafantina ho an'ireo JO 2018 na dia tsy nifaninana aza. Amin'ny fandraisana anjara amin'ireo lalao amin'ity taona ity, nanapaka hevitra izy ny hanome voninahitra izany.
Tsy nahavita nahita mpamatsy vola i Sabrina avy ao Kenya
Tsy afaka nahazo famatsiambola avy amin'ny Komity Nasiônaly Olaimpika ao Kenya (CNO-K) ilay hany tokana solontenan'i Kenya, Sabrina Samider, vehivavy mpikorisa amin'ny ski tokony hifaninana amin'ny fikorisàna avy any an-tendrombohitra, ho an'ny JO faharoa misesy nandraisany anjara. Fihodinan-javatra mampalahelo, satria tamin'ny 2018 dia ny CNO-K no nanohana azy ara-bola ary nanotrona azy. Tsy nisy fanazavana naroso momba izay antony nahatonga ny CNO-K tsy namatsy vola azy tamin'ity taona ity.
Ny tantaran'i Afrika sy ireo JO Andro Ririnina
Enimpolo taona lasa izay, nandritra ireo Lalao tao Squaw Valley, Kalifôrnia tamin'ny 1960, i Afrika Atsimo no voalohany tamin'ireo firenena afrikàna nisolo tena an'i Afrika tanatin'ireo Lalao amin'ny Andro Ririnina. Ny ampahefatr'ireo atleta afrikàna tamn'izany dia irony mpandihy misosa ambony ranomandry irony, isan'izany i Marcelle Matthews, izay vao 11 taona, ny zandriny indrindra tamin'ireo mpandray anjara tamin'ireo Lalao. Nanjohy ny diany taty aoriana i Patricia Eastwood, 12 taona, Marion ‘Penny’ Sage, 16 taona, ary i Gwyn Jones, 20 taona.
Izay no fotoana farany nanatrehan'i Afrika Atsimo ny JO Andro Ririnina ho an'ireo taona 34 nifandimby taty aoriana, taorian'ny nandraràna azy tany am-boalohany tsy ho afaka handray anjara tamin'ny 1964 noho ny fandàvan'ny federasiôna nasionaly ôlaimpikany tsy hanameloka ny ny “apartheid”. Farany, noroahan'ny Federasiôna Olaimpika Iraisampirenena (CIO) ireo atleta afrikàna tatsimo ho fanoherany ny apartheid sy ireo pôlitika nasiônaly mifototra amin'ny fanavakavahana ara-poko. Nanomboka teo, 15 ireo firenena nisolo tena an'i Afrika tamin'ireo JO Andro Ririnina, izany hoe 28% eo ho eo amin'ireo firenena ao amin'ilay tanibe.
Tsy toy ireo JO tany aloha izay nandraisan'ireo tarika tamin'ny taranja “bobsleigh”, tamin'ity taona ity, tany amina taranja atao ho an'ny isambatan'olona no nifaninana ireo Afrikàna mpandray anjara.
Fanamby tokana miaraka amina fahafahana manomana tena voafetra no atrehan'ireny mpandray anjara ireny. Ny ankamaroan'ireo mpikorisa amin'ny ski dia manana fifandraisana akaiky amin'ireo firenena manana ranomandry any amin'ny ilabolantany avaratra, toa an'i Frantsa, Soisa, Alemaina. Maro no taranaka manana ray aman-dreny afrikàna sy eorôpeàna, na natsangana fianakaviana eorôpeàna. Ny hafa indray nandao ilay tanibe mba hikaroka fahafahana mandranto fianarana na asa sy fiofànana.
Ireny fanamby ireny no antom-paharisihana ho an'ny mpikorisa ski marobe. Ho an'ireo atleta, fotoana iray fanararaotra ny JO mba hitondra aingampanahy sy fandrisihana ho an'ireo taranaka ôlaimpiàna afrikàna amin'ny hoavy.
Raha hitady vaovao misimisy kokoa momba io lohahevitra io, tsidiho ny tahirin-kevitray manokana ny “Rehefa lasa pôlitika ny fanatanjahantena: ny ao ambadiky ny Pékin 2022″